Maamulka kooxda Chelsea oo Canbaareeyey Taageerayaasha Naadigooda Sabab? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Maamulka kooxda Chelsea oo Canbaareeyey Taageerayaasha Naadigooda Sabab?
(14-12-2018) Jamaahiirta kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa xalay sameeyey fal maamulka kooxdoodu ku tilmaameen inuu ceeb yahay, kaddib markii ay qaadeen hees lagu aflagaadaynayo Yuhuudda intii ay socotay ciyaartii Europa League ee MOL Vidi ay la galeen barbar-dhaceen.
Falkan oo yimid toddobaad kaddib markii taageereyaasha Blues lagu eedeeyey inay aflagaado cunsuriyad ah kula kaceen weeraryahanka Manchester City ee Raheem Sterling, ayaa waxa markiiba war kasoo saaray maamulka Chelsea oo caddeeyey inay ceeb iyo fadeexad ku tahay kooxdooda.
Tiro aan badnayn oo jamaahiirta Chelsea ah ayaa la maqlayey iyagoo qaadaya hees Yuhuud nacayb ah oo ay ula jeedeen Tottenham, waxaana la bilaabayaa baadhitaan ku saabsan sida wax u dhaceen.
Afhayeen u hadlay Chelsea ayaa waxa uu sheegay hees nacayb ah ama wax kale oo takoor ah sida mid diimeed ay kooxdu ka dagaallamayso, tirada badan ee taageereyaasheeduna kasoo horjeedaan, sidoo kalena aanay kuwa waxaa sameeyey meel ku lahayn Blues iyo bulshadeeda midna.
Dhinaca kale, UEFA ayaa sugaysa warbixinta garsooraha ciyaartu soo gudbin doono, waxaanay halkaas ka heli doonaan go’aanka ay ka qaadanayaan Chelsea oo ay suurtogal tahay in ciqaab ganaax ah ay ku mutaysato.
Wariye ka tirsan wakaaladda wararka Press Association oo lagu magacaabo Matt McGeehan ayaa waxa uu sheegay in heesta ay jamaahiirta Chelsea ku luuqeeyeen si fiican looga maqlayey dhamaan garoonka.
“Waxay ahay bilowgii hore ee ciyaarta. waxa heesayey taageereyaasha Chelsea oo horena sidan u sameeyey, waxaanay isticmaalayeen ereyga ‘y’, kelmada dadka yuhuudda nacaybka ah.” Sidaas ayuu yidhi Matt McGeehan.
“Ma fahmayo in Chelsea ay ka cadhootay madax illaa mijio, laakiin xaqiiqadu waa inuu ka xumaanayo mulkiilaha Roman Abramovich oo Yuhuudi ah.” Ayuu mar kale yidhi wariye Matt McGeehan.
Chelsea ayaa waxa hore ugu socday baadhitaan la xidhiidha aflagaadadii cunsuriyeysnayd ee ay toddobaadkii hore kula kaceen Raheem Sterling, waxaana labadan fal oo iskaashaday ay sababi karaan ciqaab la saaro naadigan.